Xubno ka mid ah Mucaaradka Ethiopia oo la Xidhay – Rasaasa News
Aug 31, 2011 Labo ka mid ah Mucaaradka Ethiopia oo la Xidhay
Addis Ababa Aug 31, 2011 [ras] – labo ka mid ah mucaaradka Ethiopia oo la xidhay, kuwaas oo mid ka mid ah lagu eedeeyey arimo la xidhiidha argagixisanimo. Laakiin hogaamiyeyaasha mucaaradku su,aal ayey ka qabaan xadhiga, iyaga oo leh xadhigu wuxuu u muuqdaa arimo siyaasadeed.
Afhayeenka dawlada Shimeles Kemal ayaa sheegay in la xidhay Sabtigii xubin sare oo mucaaradka ah, oo magaciisa la yidhaahdo Bekele Gerba. Ninkaas oo lagu eedeeyey in uu xidhiidh la leeyahay ururka la mamnuucay ee OLF, ururkaas oo u dagaalama xoraynta Oromiya, oo ah qoomiyada ugu balaadhan qoomiyadaha Ethiopia.
“Bekele Gerba, waxaa xidhay ciidanka wadaaga ah ee la dagaalanka argagixisada, dacwadiisuna waxay lug ku leedahay xidhiidh uu la lahaa ururka mar dhawayd lagu sharxay in uu yahay argagixisada ee OLF” sidaas waxaa yidhi Shimeless.
Bekele, waxaa weeye macalin ka dhiga luuqada Ingriiska Jaamacada Addis Ababa, xubina ka ah gudiga fulinta ee mucaaradka isbiirsaday ee ugu weyn Ethiopia, Medrek, isla markaasna ah gudoomiye xigeenka Oromo Federal Democratic Movement [OFDM].
Hogaamiyeyaasha Medrek waxay sheegeen in siyaasi kale oo mucaaradka muhiim u ah oo ka tirsan Oromo People’s Congress oo lagu magacaabo Olbana Lelisa isna la xidhay. Dirba lama cadayn in Olbana loo haysto arimo la xidhiidha argagixiso.
Mogga Frissa, oo ah gudoomiyaha wakhtigan ee labada urur Medrek iyo OFDM, wuxuu sheegay in labada nin ay sameeyeen xidhiidh isgaadhsiin dibadeed oo ururkooda ah. Waxayna gudbiyeen file ku saabsan abaarta iyo macaluusha ka jirta gabalada koonfurta Ethiopia, taas oo beenisay wararka ay dawladu hore u sheegtay.
Mogga wuxuu yidhi Bekele wuxuu si gaar ah u sheegay in la xidhay dadkii siiyey warbixinta xiligii dhawayto BBC-du warkii ay baahisay. Warkaas oo lagu dacweeyey Ethiopia in ay u isticmaashay cadaadis balaayiin dollar oo ah oo kaalmooyin loogu talo galay horumarinta.
Bekele, wuxuu ka hadlay warar ku saabsan abaaraha Ethiopia iyo in dadku ay war siiyeen dadkaas, ayuu yidhi Mogga. Bekele wuxuu maqlay in lagu xidhay koonfurta dalka dadkii warka siiyey BBC-da. Sidaas daraadeed waxaanu ka shakisanahay sababtaas.